Isitshayina Dating Etiquette - Imigaqo - Masiko - Budlelwane
Isitshayina Dating Etiquette – Imigaqo – Masiko – Budlelwane
Isitshayina dating etiquette sesinye kakuhle-ezaziwayo ezithile dating cultures ehlabathini ka-budlelwane. Ngabo ngenene ezahlukeneyo ngeendlela ezininzi thelekisa kwi-ngokufanayo dating etiquette kwi-Western amazwe, nkqu bubonke amazwe kwi-Mpuma Asia. Ndivuma kakhulu influenced yi-zabo inkcubeko kunye tradition, Isitshayina sele kwezabo imithetho dating. Oku, nangona kunjalo, kwakhona ke nomdla kulo mhla pushed ezantsi younger kwisizukulwana yi-abantu abadala. Ukuba uyayazi nto ngalento, ngoko ke get ilungele faka entsha ngokupheleleyo ihlabathi ka-dating. Apha ndiza share kuwe abanye ngokufanayo etiquette malunga dating kunye Isitshayina. Amadoda nabafazi kwi-China kuba ezininzi koxinzelelo yokufumana watshata. Xa babe sele zabo s kwaye uzole omnye, bubizwa embarrassment kwaye nkqu intlekele. Yiloo”iibhonasi”boyfriend kwaye girlfriend ingaba ngokufanayo kwi-China. Ngenxa ka-uxinzelelo ukufumana iqabane lakho yi high, Isitshayina ufuna ukufumana matchmaking. I-abantu abaqhelekileyo esetyenziswayo ingaba dating college abahlobo, colleague emsebenzini, okanye ngokusebenzisa i-intanethi dating inkonzo. Kuyinto eqhelekileyo imboniselo kwi-China apho eziliqela kulutsha ehleli kunye ngexesha rock okanye restaurant abekho matchmaking seshoni.
Ngoko ke, kuqala impression idlalwe omkhulu inxalenye kwi-continuity kubudlelwane. Udumisa i abafazi imbonakalo kakhulu ngokufanayo ne-China. Xa Western abafazi ungathanda ukuba baguqukele yakhe ubuso kude emva kokuba abantu compliment yakhe ubuhle, Isitshayina abafazi uphumelele khange. Baya liked ngayo xa abantu badumisa imbonakalo yabo. Nangona abafazi kwi-Western amazwe izakuba delighted ukukhetha apho kudla, Isitshayina abafazi rely ngaphezulu kwi abantu kwi-kwezigqibo. Oku kwenzeka kwi-phantse wonke isiganeko esifana igqiba apho kudla kwaye ordering lokutya. Akuvumelekanga ukuba abekho nako ukwenza kwezabo isigqibo, kodwa abazange worried nokuba ngaba abantu baya efana ngayo okanye hayi.
Xa abantu bathabathe baphile, lowo lifts a
mthwalo ngaphandle kwayo shoulder, ukuba s Isitshayina dating etiquette Tradition ucela Isitshayina abafazi kufuneka ukuba neentloni waza introverted, ingakumbi ngakulo umntu. Ngoko ke, initiating a incoko ufumana into Isitshayina abafazi uphumelele khange senze. Kubalulekile kananjalo ngenxa yabo uloyiko exposing kakhulu kangako herself ukuba babe wakhokela abantu ucinga kakubi ngabo. Kwi-Isitshayina dating etiquette, abantu athabathe ulawulo. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, abafazi azinako kakhulu vula ngakubo amadoda. Yiloo enjalo private izihloko njengoko ingeniso, iimeko abaphila, abahlala inkcitho, elidlulileyo romance, kwaye ezinye oluneenkcukacha incoko ngu big akukho kuba wathetha ngexesha umhla. Jikelele izihloko njenge usapho nabahlobo ingaba ngakumbi ekhethiweyo, nkqu udumisa ngamnye ezinye appearances. Casual intlanganiso uncommonly practiced kwi-China. Younger kwisizukulwana uqalile ukwenza oku, kodwa ihlala ingu elingamkelekanga kwi-makhulu inkcubeko. Ukuba ezimbalwa sele kuhlangatyezwana nazo kuba ilixa lesithathu okanye ngaphezulu, abafazi uza thabathani njengoko i-uphawu inzala, nkqu impression ukuba babeya sifuna ukufumana watshata. Isitshayina dating etiquette, ngoko ke akukho trivial zinto Isitshayina dating. Xa lover, wathi,”mna unobuhle wena”okanye”mna uthando wena”, abafazi uza thabathani seriously. Akukho mntu kwi-Isitshayina wathi ezi zinto ngaphandle imikhuba okanye nkqu njengoko elula joke. Kwi ephikisana, kubalulekile wathathwa kubonisa umntu ke entliziyweni. Kwi-Western inkcubeko, ukumiselwa girlfriend okanye boyfriend ukuba abazali bamele ngokufanayo nokuba seriousness kubudlelwane. Ngexesha China, kubalulekile kakhulu ezahlukeneyo nto. Ethabatha umlingane wakho kwaye angenise kwabo ukuba abazali bakho fanart umgangatho seriousness yakho budlelwane. Xa oku kwenzeka, oko kuthetha ukuba bobabini ukulungele escalate elandelayo inqanaba: umtshato. Kukho tradition kwi-China apho abazali, kwaye kwiziganeko eziliqela, oomawomkhulu ingaba highly abakwicandelo ezinye ezimbalwa ke lovey yehobe budlelwane. Oko kukholisa ukuba kwenzeka ntoni xa abazali bamele enye abo ukumisela isixhobo intlanganiso kuba abantwana babo. Ukuba ayinjalo, kukho abanye abafazi kwi-China abakhoyo intonga ukuba endala tradition apho yena kwaye yakhe ingaba iqabane lakho kuhlangana kuphela ngexesha iindawo ukuze wamkelwe libhunga yakhe abazali (oomawomkhulu) ezingaphambili.
Nje qinisekisa njani exciting indawo izakuba
Kwi-Western inkcubeko, awunokwazi ibhombu ye umlingane wakho kunye amakhulu konxibelelwano waza wagqitywa wonke omnye yure. Okanye kungenjalo, uya kufumana irritated kwaye yokulahlwa: wena kuba worse. Kodwa trust kwam, oko kukuthi ezenzeka nto kwi-China. Kubalulekile kulungile ukuba abafazi thumela okubhaliweyo okanye ukwenza unxulumano iiyure ezintathu phambi zabo arranged ntlanganiso. Obukhulu koxinzelelo ka-ukufumana iqabane lakho kwi-Isitshayina inkcubeko ngenxa ngamanye nto: tendency kuba Isitshayina abafazi ukufumana watshata kwangethuba. Ngenxa yayo inkcubeko-oriented, elonyuliweyo ke, abazali oomawomkhulu kukho okkt abo ubeke uxinzelelo kwi-mtshato, nokuba ngaba elonyuliweyo herself lilungile okanye hayi. Umdala abantu ngathi ukucwangcisa intombi kunye nangaphezulu babantu, njengoko zinjalo ngakumbi reliable, earn ngokwaneleyo imali, kwaye idla kuba oqaqambileyo elizayo. Isitshayina abantu valued marital uzinzo ngaphezu kwento yonke. Abanye abantu China get watshata ngaphandle ubomi ukunceda kunokuba uthando. Lento kutheni abazali kanjalo njenge ukucwangcisa abantwana babo phezulu intlanganiso. Kukho ngokufanayo inkcubeko kwi-China ngokuba watshata kwimakethi. Kwaye kubalulekile literally yentengiso, njengoko crowded kwaye njengoko omkhulu njengoko kunjalo. Ukususela encinane umlinganiselo njengoko, private intlanganiso phakathi abazali ukuba enkulu abakhasayo exhibition kunye anamashumi-nxaxheba. Uniquely, okkt abo get abakwicandelo esi siganeko ingaba abazali. Baya idla ehleli kwi-phambili i-umbrella ngokupheleleyo esibhaliweyo kunye abantwana babo ke inkangeleko kwaye dibanisa amaxabiso. Baye kanjalo akwazi ukufikelela kwinani abantwana babo kulo lonke msitho ukuba jonga kwezo meko-imithetho. Xa thelekisa ufunyenwe, baya kuqhubeka ngasese kumisa intlanganiso ukuze abantwana. Kwaye ukuba icace phandle kuba olungileyo, umtshato uza lubanjwe zingaphelanga iinyanga. Ngexesha Western valued ka-virginity sele okokoko ngokunciphisa kwaye abafazi babo sele ezininzi omnye-busuku kuma ubudlelwane kunye ezahlukeneyo abantu, Isitshayina abafazi ukuba kakhulu highly zabo virginity isimo. Phezulu nanamhlanje, virginity omntu omnye crucial izinto zabo inkcubeko. Kwi-abantu ukuthatha umfazi ke virginity, oko kuthetha ukuba i-ultimate imbono kubudlelwane ngu-mtshato. Isitshayina abafazi kuphela zinika zabo virginity kwenye kokuba ngenene wayemthanda, okanye omnye zinjalo na enye kwixesha elizayo. Oku ayisasebenzi ngokufanayo kwi-Isitshayina dating etiquette nowadays. Kodwa abanye abantu abathi igcine kwi zabo zomthonyama beliefs ucinga ukuba akukho ngcono thelekisa kuba nabo engelilo kwezabo descent. Efanayo ukuqonda ngendlela efanayo inkcubeko kanjalo omnye ukuxhasa ifekta kuba Isitshayina kumhla ngamnye enye. Omtsha phenomenon ityhila ukuba Isitshayina abafazi zithanda umhla Western abantu. Kukho izinto numerous stereotypes kubo abo umhla Western abantu babe ngathi. ikhangela a luxury ubomi kwaye usebenzisa umtshato njengokuba ticket ngaphandle China.
Kodwa asiyiyo yonke inyaniso
Apha mna kaloku wena ezinye izizathu yintoni Isitshayina abafazi uthando ukusuka Kwintshona abantu: Isitshayina abantu ikakhulu focused kwi ekubeni a iityuwadefault colour umsebenzi kwaye oqaqambileyo elizayo. Baya ingqondo zabo kuphela-mali iimfuno ngaphandle ekubeni nawuphi na wayecinga ukuba bonwabele ubomi. Nantsi into Isitshayina abafazi fumana kwi-Western abantu. Baya kuba ngokubanzi imboniselo ebomini ukuba ekubeni financially iityuwadefault colour ayikho zabo imbono engundoqo ebomini. Kodwa, abahlala a ndonwabe kwaye uyakuthanda ubomi ngakumbi ebalulekileyo. Oku omnye umgangatho yenza Isitshayina abafazi uthando Western abantu. Kwi-China, xa umfazi ubani onzulu elidlulileyo wakhe budlelwane ezifana wokuqhawula umtshato ngayo sibonwa a zeentloni. Njalo, ekuhlaleni kwaye zabo elizayo iqabane lakho ekubeni nzima ixesha ukwamkela kuyo. Kuba i-Western umntu, elidlulileyo budlelwane nto kuba nazintloni. Baya elubala yamkela zabo weqabane lakho elidlulileyo budlelwane kwaye uyise kwi kunye elizayo kunye nabo. Kuba Isitshayina abafazi, ke into yokuba, unga fumana inkcubeko yabo. Xa ke iza imbambano, Isitshayina abantu ingaba lohlobo ka-iyeka nayiphi na impikiswano ukusuka zabo iqabane lakho. Yabo rhoqo-ethabatha kukhokela kwi-phantse yonke indalo emilisiweyo kubo kuba isigqibo maker, kuquka xa balwe phakathi couples kunokwenzeka. Ikomishini abantu, kwi ephikisana, willingly kuva zabo neqabane yokusombulula ingxaki kunye. Dating isimbo ngu ndivuma kakhulu influenced yi-inkcubeko apho okkt abahlala okanye kukhula kunye. Kwi-Western kwaye kumazwe asempumalanga, budlelwane nabanye phakathi amadoda nabafazi ingaba bazibona ukusuka ezahlukeneyo sesishumi. Ingakumbi kwi-China, apho Isitshayina dating etiquette ingu ndihamba olomeleleyo phezulu kulo mhla. Nangona kunjalo, siya kufuneka ahlawule abanye ngokubhekiselele kwaye hayi underestimate inkcubeko yabo